K: Joyful Tear on University Avenue Road
Joyful Tear on University Avenue Road
ဧရာဝတီ စာမျက်နှာမှ ဒီ သမိုင်း ၀င် ဆောင်းပါးလေးကို ထပ်ဆင့် မျှဝေ ရင်း.. ပြည်တွင်းမှ လူများလည်း ဖတ်နိုင်စေ.. ကိုယ့် ရဲ့ စာမျက်နှာ လေးမှာလည်း သိမ်းဆည်း ထား မယ်လို့ ရည်ရွယ် လျက်...
တက္ကသိုလ်ရိပ်သာ လမ်းပေါ်ကျတဲ့ မျက်ရည်မိုး
စက်တင်ဘာ ၂၃ ၊ ၂၀၀၇
သာသနာ့အလံ တလွှင့်လွှင့်နဲ့ ရှေ့ဆုံးကနေကြွချီလာကြတဲ့ သံဃာတော်သုံးပါးဟာ လှည်းတန်းလမ်းဆုံမီးပွိုင့်နားကိုရောက်တော့ ဖျပ်ခနဲ တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်းမကြီးဘက်ကိုလည်း ချိုးဝင်လိုက်ရော ကျနော့်ရင်တွေ တဒိန်းဒိန်း ခုန်လာတော့တယ်။
ကျနော်အပါအ၀င်အတော်များများဟာ သံဃာတော်တွေ မြေနီကုန်းကနေ လှည်းတန်းဘက်ကို ဦးတည်ပြီး ကြွပြီ ဆိုကတည်းက မြောက်ဥက္ကလာပ မယ်လမု ဘုရားဆီကို ဦးတည်နေပြီလို့ ထင်မှတ်ခဲ့ကြတာပါ။ အဲဒါကြောင့် လည်း လှည်းတန်းမှာ ကြိုစောင့်နေကြတဲ့ သံဃာတော်တွေနောက်ကနေ လိုက်ပြီးအားပေးရင်း အကာအကွယ် ပေးဖို့ စောင့်နေကြသူတွေက သူတို့ခန့်မှန်းထားတဲ့အတိုင်း လှည်းတန်းမီးပွိုင့်ရဲ့ ပြည်လမ်းဘက် အခြမ်းကနေ နေရာယူထားပြီး စောင့်နေကြတာပေါ့။
ခုတော့ မိုးစက်တွေအောက်မှာ မေတ္တာသုတ်တွေရွတ်ဆိုရင်းလျှောက်လာကြတဲ့ သံဃာတော်တွေက တက္ကသိုလ် ရိပ်သာ လမ်းဘက် ချိုးဝင်လိုက်ပြီ။ ဒါဆိုရင် သာံဃာတော်တွေဟာ ကျနော်တို့ ချစ်တဲ့၊ လူထုကို ချစ်တဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့နေအိမ်ရှိရာဆီကို ဦးတည်လိုက်ပြီဆိုတာကို လိုက်ပါလာကြသူတွေ အားလုံးလိုလိုက သိလိုက်ပါပြီ။ အဲဒီအသိနဲ့အတူ ကျနော်တို့ရဲ့ ခြေလှမ်းတွေဟာလည်းပိုပြီ တက်ကြွလာကြတယ်။
ကျနော့်အထင်တော့ သံဃာတော်တွေဟာ စုစုပေါင်း အပါး ၇၀၀ ကျော်ကနေ ၁၀၀၀ ၀န်းကျင်လောက်ရှိမယ်။ အတော်များများဟာ အသက် ၂၀ ကနေ ၄၀ ကြားအရွယ်ရှိတဲ့ သံဃာပျိုတွေများတယ်။ သံဃာတော်တွေဟာ မိုးရေစက်တွေအောက်မှာပဲ မိုးသံကိုလွှမ်းအောင် မေတ္တာသုတ်ရွတ်ဆိုရင်း ရန်ကုန်ပင်မတက္ကသိုလ်ကျောင်းကြီး ရှေ့မှာ ၈ မိနစ်လောက်ကြာအောင် ရွတ်ဖတ်ပေးခဲ့ကြတယ်။အဲဒီအချိန်မှာ ကျနော်ကတော့ သံဃာတော်တွေလို မအေးချမ်းနိုင်ခဲ့ဘူး။ ကျနော်တို့ချစ်တဲ့ အန်တီစု အိမ်ရှေ့ကနေ ဖြတ်တော့မယ်ဆိုတာကို ကျနော့် သူငယ်ချင်းတွေ ကို ပြောပြချင်တဲ့စိတ်နဲ့ ကျောင်းရှေ့နားက ပီစီအို ဖုန်းလေးနားမှာ ရစ်သီရစ်သီလုပ်ရင်း မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းတွေ ကို ဖုန်းဆက်ခေါ်နိုင်ဖို့ ကြိုးစားခဲ့တယ်။
အဲဒီမိနစ်ပိုင်းလေးအတွင်းမှာ ကျနော့်လိုပဲ ဖုန်းဆက်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့သူတွေက အယောက် ၂၀ လောက်ရှိတော့ ပီစီအို ဖုန်းလေးလုံးဟာ ဘယ်လိုမှ မအားနိုင်သလို ကျနော့် အလှည့်လည်း မကျခဲ့ပါဘူး။ နောက်တော့ စိတ်လျှော့ လိုက်ပြီးသံဃာတော်တွေဘေးနားကနေ ကာရံရင်းလိုက်ပါသွားခဲ့တာ အမေရိကန်သံရုံးရှေ့မှာလည်း ၁၀ မိနစ် လောက်ကြာအောင် သံဃာတော်တွေဟာ မေတ္တာသုတ်တွေ ရွတ်ဆိုပေးခဲ့ပါတယ်။
အဲဒီနားက မီးပွိုင့်ကို ဖြတ်တော့ ကျနော့်ရင်တွေ တဒိန်းဒိန်းနဲ့ ပြန်ခုန်လာခဲ့တယ်။ အန်တီစု အိမ်ရှေ့နားကို မရောက်မီ လေးငါးကိုက်အလိုလောက်မှာ သံဆူးကြိုးတွေနဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့ ဘာရီရာ တွေချပြီး လမ်းပိတ်ထား တယ်။ အဲဒီဘာရီရာတွေရှေ့မှာ သံဃာတော်တွေဟာ သုံးပါးတတွဲစီတန်းလမ်းလျှောက်လာရာကနေ ရပ်လိုက်ကြ တယ်။ ကျနော်အပါအ၀င် လိုက်ပါလာကြတဲ့သူတွေမှာ ဒီနေရာကနေ ဖြတ်သန်းခွင့်မှ ရပါ့မလား၊ ဖြတ်သန်းခွင့် မပေးရင်ကော သံဃာတွေဟာ နောက်လှည့်ပြန်မှာလားဆိုပြီး လားပေါင်းများစွာနဲ့စိုးရိမ်စိတ်တွေ ၀င်လာကြလို့ ကိုယ့်အနီးအနားက လူတွေအချင်းချင်း တဦးကိုတဦး အဓိပ္ပာယ်ပါတဲ့ မျက်ဝန်းတွေနဲ့ အပြန်အလှန်ကြည့်ဖြစ်ကြ တယ်။
တကယ်တော့ ကျနော့်ဘေးနဲ့ လက်ချင်းချိတ်တွဲပြီးလိုက်ပါလာတဲ့ အသက် ၄၇ နှစ်အရွယ် အမျိုးသားကြီးဟာ အရင်ကသိကျွမ်းခဲ့ဖူးသူ မဟုတ်ပါဘူး။ခုလို လမ်းလျှောက်ရာမှာ လိုက်ပါကြရင်း လက်ချင်းချိတ်ပြီး သံဃာတွေကို ကာကွယ်တဲ့အခါကြမှ မြင်ဖူးတွေ့ဖူးကြသူတွေပါ။ ဒါပေမယ့် ကျနော်တို့ ရင်ထဲမှာ ရှိကြတဲ့ နှလုံးသားတွေက တူညီနေကြတယ် ထင်ပါရဲ့။ ကျနော့်ရဲ့ အကြည့်ကို အဲဒီ အမျိုးသားကြီးက သိတယ်။ ပြီးတော့ သူပြန်ကြည့်လာ တဲ့ အကြည့်ရဲ့ အဓိပ္ပာယ်ကိုလည်း ကျနော်က နားလည်နေတယ်လေ။
အဲဒီလို ကျနော်တို့ စ်ိတ်လှုပ်ရှားစွာနဲ့ ရပ်စောင့်နေရတာ ငါးမိနစ်လောက်ကြတယ် ထင်တယ်။ ဒါပေမယ့် ခဏ အတွင်းမှာပဲ လက်ခုပ်သံတွေကထွက်လာခဲ့တယ်။ ကျနော်သိလိုက်ရတာကတော့ ရှေ့ဆုံးကနေ ဦးဆောင် ချီတက်လာကြတဲ့ သံဃာတပါးရဲ့ မိန့်ဆိုမှုကြောင့် လမ်းဖွင့်ပေးလိုက်တယ် ဆိုတာပါပဲ။ အဲဒီအချိန်မှာ အသက် ၃၅ နှစ်ဝန်းကျင်အရွယ် သာသနာ့အလံကိုင်ထားတဲ့ သံယာတပါးက လူတွေဘက်ကိုလှည့်ကြည့်ပြီး မိန့်တယ်။
“ဒါကာတို့ဒါကာမတို့ ဒီနေရာဟာ အန္တရာယ်ရှိတဲ့ နေရာဖြစ်တဲ့အတွက် အထူး စည်းကမ်းရှိဖို့လိုတယ်၊ သံဃာတွေကလည်း နှစ်ပါးတတွဲစီပါ ။ လူတွေကလည်း နှစ်ယောက်တတွဲစီပြီး လျှောက်ကြပါ၊ စည်းကမ်းရှိကြပါ” လို့မိန့်မှာတယ်။ အဲဒီမှာ ကျနော်တို့ဟာ သံဃာတွေရဲ့ ညာဘက်ဘေးကနေ လူတစ်ယောက်စီ လက်ချင်းချိတ် လိုက်ပြီး ဖွင့်ပေးထားတဲ့ လူသုံးဦးစာသာ တပြိုင်တည်းဖြတ်လို့ရတဲ့ နေရာလေးကနေ ဖြတ်ပြီးရှေ့ကို လျှောက် လာကြတယ်။ ကျနော်တို့လျှောက်လာတဲ့ လမ်းတလျှောက်မှာတော့ စစ်အစိုးရ အစောင့်ချထားတဲ့သူတွေရော ၊ သူတို့ စီးလာတဲ့ ကားတွေပါ ရပ်ထားတာ မြင်တွေ့ကြရတယ်။
လူထုချစ်သော၊ လူထုကိုချစ်ပြီး အနစ်နာခံတတ်သော လူထု ခေါင်းဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့အိမ်ရှေ့ ရောက်တော့ ရှေ့ဆုံးက သံဃာတော်တွေဟာ ခြံဝင်းပေါက်ရှေ့တည့်တည့်နားမှာ အိမ်ဘက်ကို မျက်နှာမူပြီး ရပ်လိုက်ကြတယ်။ နောက်က သံဃာတွေကလည်း တစ်ပါးစီ ညီညီစီပြီး ရှေ့သံဃာတွေအတိုင်း အိမ်ဘက်ကို မျက်နှာမူပြီးရောက်တယ်။ သံဃာတွေရဲ့နောက်မှာတော့ လက်ချင်းချိတ်ပြီးလိုက်လာတဲ့ သူတွေက တဦးချင်းစီ ရပ်လိုက်ကြတယ်။
သံဃာတွေရဲ့ရှေ့မှာတော့ စစ်ယူနီဖောင်းလား၊ ရဲ ယူနီဖောင်းလား ကျနော်မခွဲခြားတတ်တဲ့ နက်ပြာရောင် ယူနီ ဖောင်း အပြည့်အစုံဝတ်ထားတဲ့ အစောင့်တွေက သံဒိုင်းကြီးတွေကို သူတို့ရင်ဘတ်ရှေ့မှာ အကာကွယ်ယူကိုင် ထားပြီး ရှေ့မှာရပ်နေတဲ့ သံဃာတော်တွေဆီကို အသင့်အနေအထားနေရာယူပြီး မျက်လုံးမမှိတ်မသုန် စူးစိုက် ကြည့်နေလိုက်ကြတာ။ ကျနော်ဖြင့် ရင်တွေ တဖျပ်ဖျပ်တုန်လာတယ်။ တခုခုသာဆို သူတို့ ပုံစံတွေက ပစ်တော့ မယ်ဆိုတာ သိသာလွန်းတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာပဲ သံဃာတော်တွေက နမောတဿ သုံးကြိမ်ရွတ်တယ်။ ပြီးတော့ မေတ္တာသုတ်ကို စရွတ်တော့တယ်။
သံယာတော်တွေ မေတ္တာသုတ်ရွတ်နေတုန်း ကျနော်တို့လူထုဟာ ရှေ့မှာလှမ်းမြင်နေရတဲ့ အန်တီစု ၀င်းထဲက ဟောင်းနွမ်းဆွေးမြေ့နေတဲ့ အဆောက်အဦးတွေဆီကို လှမ်းမျှော်ကြည့်ကြရင်း အန်တီဘယ်နေရာမှာများရှိမလဲ လို့ ဟိုဟိုဒီဒီရှာဖွေ ကြည့်နေကြတယ်။
အဲဒီအချိန်မှာပဲ သံဃာတွေက မေတ္တာသုတ်ရွတ်ဆိုတာပြီးလို့ မင်းကွန်းဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ အရပ်ရှစ်မျက်နှာ မေတ္တာပို့သံစနေပြီ။ အဲဒီအချိန်မှာပဲ ခြံတံခါးပေါက်နားမှာ လက်အုပ်လေးချီပြီး ထွက်လာတဲ့ အန်တီကို ကျနော်တို့ မမျှော်လင့်ဘဲ အားလုံး တွေ့လိုက်ကြရတယ်။
ကျနော်တို့ချစ်တဲ့အန်တီဟာ အသက် ၅၀ ကျော်အရွယ်လို့ပဲထင်ရ လောက်အောင် နုပျိုလန်းဆန်းနေပါတယ်။ မြန်မာအင်္ကျီအ၀ါခြောက်ရောင်လေးဝတ်ထားတဲ့ အန်တီ့မျက်နှာမှာ သနပ်ခါးတို့၊ မိတ်ကပ်တို့ဘာမှ လိမ်းထားတာမတွေ့ရဘူး။ လက်အုပ်ချီထားတဲ့ အန်တီ့ဆီကို ခေါင်းဆောင်ဖြစ် ဟန် တူတဲ့ သံဃာတပါးက ရှေ့ထွက်ပြီး တစ်ခုခုကို မိန့်တယ်။ အန်တီကလည်း ရှေ့ကို ခြေလှမ်းတလှမ်းလောက် တိုးလာပြီး ဆရာတော်ဘုရားကို တခုခုလျှောက်တယ်။
အဲဒီမြင်ကွင်းဟာ ကျနော့်ဘ၀အတွက် မှတ်မှတ်ရရအဖြစ်ရဆုံး မြင်ကွင်းတစ်ခုပါပဲ။ ကျနော်တို့ချစ်တဲ့ လူထု ခေါင်းဆောင်တယောက်နဲ့ သံဃာတော်တွေကိုဦးဆောင်ပြီးလူထုအတွက်ပေးဆပ်နေကြတဲ့ သံဃာတော်တပါးရဲ့ ကြားမှာ သံဆူးကြိုး ဘာရီရာရှိတယ်။ ပြီးတော့ အန်တီ့နောက်မှာ အရပ်ဝတ်နဲ့မိန်းမကြီးတစ်ယောက်နဲ့ အမျိုးသား ၂ ဦးရှိတယ်၊ အန်တီ့ရှေ့မှာတော့ ရဲယူနီဖောင်းဝတ်ထားတဲ့ ရဲမှူးလားဘာလားမသိတဲ့ရဲအရာရှိတဦးက ဘုန်းဘုန်း နဲ့ အန်တီကြားကိုဝင်ရပ်ပြီး တားတယ်။
အဲဒီအချိန်မှာ လူထုထဲက ဘယ်သူက စပြီး အော်လိုက်တယ်မသိဘူး“ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကျန်းမာပါစေ၊ ချမ်းသာပါစေ၊ အချုပ်အနှောင်ကနေ အမြန်ဆုံး လွတ်ကင်းပါစေ”လို့ စအော်လိုက်ရော ကျန်တဲ့ လူတွေအားလုံး ကလည်း လိုက်အော်ကြတော့တယ်။ အဲဒီကြွေးကြော်သံတွေကို လူတွေပါမက သံဃာတွေကပါ ၀ိုင်းပြီး အော်ကြ တယ်။ လူထုရော သံဃာတွေပါ လက်သီးလက်မောင်းတန်းပြီး “ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကျန်းမာပါစေ၊ ချမ်းသာ ပါစေ၊ အချုပ်အနှောင်ကနေ အမြန်ဆုံးလွတ်ကင်းပါစေ”လို့ ထပ်ခါထပ်ခါ ရွတ်ဆိုကြတယ်။ သိပ်ကိုအားရကျေနပ် ဖို့ ကောင်းလိုက်တာ။
ကျနော်လေ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ဘယ်လိုဖြစ်လို့ ဘယ်လိုဖြစ်တယ်မသိဘူး လူထုကို အပြုံးမျက်နှာနဲ့ လက်ပြနေတဲ့ အန်တီရှေ့မှာ အဲဒီလို ရွတ်ဆိုနေရင်း မျက်ရည်တွေ ကျလာတော့တယ်။ မျက်ရည်တွေနဲ့မိုးစက်တွေကြားမှာပဲ ကျနော်တို့ရဲ့ ရွတ်ဆိုကြွေးကြော်သံတွေဟာ တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်းမကြီးပေါ်မှာသာမက အင်းလျားလမ်းထိပ် က ပါ ကြားနိုင်လောက်တယ်။ ဒီထက်မက ပြောရရင်တော့ မိုးတိမ်ယံအထိပါ ပြန့်လွင့်နေတော့တယ်။
လူထုကိုချစ်တဲ့ အန်တီကလည်း ရပ်နေတဲ့နေရာကနေ အပြုံးမျက်နှာနဲ့ သူ့ရဲ့ ညာလက်ကို မနားတမ်းဝှေ့ယမ်းပြီး လှိက်လှိက်လှဲလှဲလက်ပြတယ်။ ကျနော်ထင်ပါတယ် သူလည်းပဲ ကျနော်တို့လို မျက်ရည်တွေ ကျနေလိမ့်မယ်။ တကယ်တော့ အန်တီကို ကျနော်တို့ အပြင်မှာ မမြင်မရတော့တာ ဘယ်လောက်ကြခဲ့ပြီလဲ။ သူ့ကျန်းမာရေး အတွက် ကျနော်တို့ဘယ်လောက် စိုးရိမ်နေခဲ့ရသလဲ။ ခုလို သူရှိနေသေးတယ် ဆိုတာကို မြင်လိုက်တွေ့လိုက်ရ တော့ အရမ်းကို အားတက်မိတယ်။
ကျနော့်နားမှာရပ်ကြည့်နေတဲ့ အသက် ၅၀ ကျော်အရွယ် အင်္ကျီနံ့သာရောင်ဝတ်ထားတဲ့အမျိုးသမီးကတော့ အန်တီကို ကြည့်ရင်း ကြွေးကြော်နေရင်းက မပြောမဆိုနဲ့ ဟီးခနဲ ငိုချလိုက်တော့တယ်။ သူဘာကြောင့် ငိုတယ် ဆိုတာကို သူ မပြောပြပေမယ့် ကျနော် သိပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲ ဆိုတော့ ကျနော် ကိုယ်တိုင်လည်း ငိုရင်း ကြွေးကြော်နေတာကိုး။ အဲဒီင်္လိုပဲ အမျိုးသမီးအတော်များများဟာ ငိုရင်း ကြွေးကြော်နေကြတယ်။
အမျိုးသားတွေကတော့ အသံတွေပြာသွားတဲ့အထိ လက်သီးလက်မောင်းတန်းပြီး လှိက်လှိက်လှဲလှဲအော်ကြ ကြွေးကြော်ကြတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာပဲ ရှေ့ကသံဃာတော်တွေကို အစောင့်တွေက မြန်မြန်ကြွပေးဖို့ လျှောက်ကြ တာ တွေ့ရတယ်။ သူတို့အနေနဲ့ခုထက်ပိုပြီး စိတ်အားတက်ကြွလာကြမှာကို စိုးရိမ်ပုံရတယ်။ ခုလည်း လူထုနဲ့ သံဃာတော်တွေရဲ့ အခြေအနေကို ကြည့်ပြီး မျက်လုံးပြူးမျက်စံပြူးတွေနဲ့ ဘာလုပ်လို့ဘာကိုင်ရမှန်းမသိအောင် ဖြစ်နေပုံက ရယ်စရာကြီးပါ။
သံဃာတော်တွေ ပြန်ကြွဖို့ပြင်ကြတော့ လူထုကလည်း သံဃာတွေနောက်နားကနေ လိုက်ဖို့ပြင်ကြတယ်။ ကျနော် ကတော့ စောစောတုန်းက ရှေ့ဆုံးနားကလိုက်ပေမယ့် ခုတော့နောက်ဆုံးကလိုက်မယ်လို့ ဆုံးဖြတ်လိုက် တယ်။ ဘာဖြစ်လို့လည်းဆိုတော့ နောက်ဆုံးကနေ အန်တီ့ကို မျက်စိတဆုံးမြင်ရတဲ့အထိ ကြည့်သွားချင်လို့ပါ။
ကျနော့်လိုပဲ နောက်ဆုံးကနေ ကြည့်သွားချင်တဲ့ လူတွေတော်တော်များတယ်ထင်တယ်။ လူအုပ်ကြီးဟာ သံဃာတွေ ထွက်ပေမယ့် တော်တော်နဲ့ အန်တီ့အိမ်ရှေ့ကနေ မခွာနိုင်ကြဘူးဖြစ်နေတယ်။ အန်တီ ကိုယ်တိုင် ကလည်း ခြံတံခါးဝလေးမှာ ရပ်ပြီး လက်ပြနေတုန်းပဲ။ ကျနော်တို့လူထုကလည်း အန်တီရပ်နေရာကို လှည့်ကြည့် လှည့်ကြည့်နဲ့လျှောက်ကြတာ အန်တီရပ်နေရာကို လုံးဝမမြင်ရတော့တဲ့နေရာထိအောင် လှည့်ကြည့်နေမိကြတုန်း ပါပဲ။
အန်တီ့အိမ်ရှေ့မှာ စုစုပေါင်း မိနစ် ၂၀ လောက်ကြာခဲ့တယ်။ အစပိုင်း ၁၀ မိနစ် လောက်တုန်းကတော့ အန်တီ့ကို မြင်ခွင့်မရကြသေးဘူး။ ကျနော်ထင်ပါတယ်။ အန်တီလည်း ခုလိုထွက်ခွင့်ရဖို့ အတော့်ကို ကြိုးစားခဲ့ရရှာမယ်။ ဘယ်လိုပဲပြောပြော အန်တီ့ကို ခုလိုကျန်းကျန်းမာမာနဲ့ လန်းလန်းဆန်းဆန်းတွေ့လိုက်ရတဲ့အတွက် ကျနော် တို့ တွေ အများကြီးအားတက်သွားရပြီ။
ကျနော့်နားက အသက်၄၀ ကျော်အရွယ်အမျိုးသားကြီးကဆိုရင် “သူရှိသေးတယ်ဆိုတဲ့ အသိနဲ့တင် အားတက် ရပြီဗျာ၊ ခုလို ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ မျက်စိနဲ့ မြင်လိုက်ရတော့ ပိုပြီး စိတ်အားတက်ရတယ်၊ အဲဒါ ဆရာတော် ဘုရား တွေရဲ့ကျေးဇူးပဲ ၊ ဘုန်းဘုန်းတွေ ခုလို စွန့်စွန့်စားစားနဲ့ဆောင်ရွက်ကြတာ သိပ်ကို ကျေးဇူးတင်ဖို့ ကောင်းတယ် ဗျာ”လို့ သူရဲ့ ခံစားချက် အမြင်ကို ပြောပြတယ်။
အင်္ကျီနံ့သာရောင်ဝတ်ထားတဲ့ စောစောတုန်းက ငိုချလိုက်တဲ့အမျိုးသမီးကြီးကလည်း ပါးပေါ်က မျက်ရည်တွေကို ညာဘက်လက်ဖမိုးနဲ့ သုတ်ရင်း “ခုမှပဲ ထီးစောင်းဖို့ သတိရတော့တယ်လေ။ စောစောတုန်းကတော့ မိုးရွာနေ တယ်ဆိုတဲ့ အသိတောင် ပျောက်နေတယ်။ ဘာပဲပြောပြော ဒီနေ့တော့ သိပ်ကိုအဖိုးတန်တယ်” လို့ ပြောပါတယ်။
တကယ်တော့ အဲဒီအမျိုးသမီးကြီးဟာ မြေနီကုန်းမီးပွိုင့်ကတည်းက လိုက်လာခဲ့သူ တယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီ အန်တီက သူ့အဖြစ်အပျက်ကို ပြောပြပါတယ်။
“လှည်းတန်းနားရောက်တော့ ဒူးနာလာတဲ့အတွက် လှည်းတန်းမီးပွိုင့်ရောက်ရင်နားမယ်လို့ စိတ်ကူးခဲ့တာပါ။ ဒါပေမယ့် ဆရာတော်တွေက တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်းဘက်ကို ကွေ့လိုက်ကြတော့ အန်တီလည်း ဟာ ဒါဆိုရင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အိမ်ရှေ့က ဖြတ်မှာပေါ့ဆိုပြီး ဒူးနာနာနဲ့ဆက်လိုက်လာတာ ခုတော့သိပ်အဖိုးတန်သွားပြီ” လို့ပြောပြခဲ့ပါတယ်။
ကျနော့်နဲ့အတူ တလမ်းလုံးလိုက်ပါလာတဲ့ အသက် ၂၆ နှစ်အရွယ် အမျိုးသားတဦးကလည်း ဒီနေ့က စပြီး သူဟာ လူဖြစ်ရကျိုးနပ်သွားပြီလို့ဆိုပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲ ဆိုတော့ အန်တီကို ခုမှ မြင်ဖူးတာ၊ ပြီးတော့ ခုလို အစောင့်တွေကြားထဲကနေ ခက်ခက်ခဲခဲမြင်တွေ့လိုက်ရတဲ့အတွက် ပိုပြီး တန်ဖိုးရှိတယ်လို့ ပြောပြပါတယ်။
အဲဒီကနေ ဆက်ပြီး ကြွချီလာကြတဲ့ သံဃာတော်တွေရဲ့ မေတ္တာပို့သံတွေဟာ ပိုပြီး ကျယ်လောင် တက်ကြွလာ တယ်။ ဘေးကနေ ရံပြီးလိုက်ပါလာကြတဲ့ လူထုရဲ့ ခြေလှမ်းတွေကလည်း စောစောတုန်းကထက်ပိုလို့ မြဲမြံ ခိုင်မာ လာခဲ့တယ်။ အန်တီ့အိမ်ရှေ့မှာတုန်းက မိုးဘယ်လောက်သည်းသည်း ထီးဆောင်းဖို့ကို မေ့လျော့ကုန်ကြတဲ့ သူတွေကလည်း ခုမှ ထီးတွေထုတ်စောင်းပြီး တက်ကြွစွာနဲ့ဆက်လျှောက်ကြတာပေါ့။
အာဏာရှင်စစ်အစိုးရက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ဘယ်လိုပဲ ပိတ်ပင်ချုပ်နှောင်ထားခဲ့ပါစေ လူထုရဲ့ ရင်ထဲ နှလုံးသားထဲက အန်တီ့အပေါ်ချစ်တဲ့စိတ်နဲ့ ယုံကြည်မှုတွေကိုတော့ ဘယ်လိုအရာမျိုးနဲ့မှ တားဆီးထားနိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ။
ဒေါ် စု သက်တော်ရာကျော် ရှည် ပါစေ။ ငြိမ်း ချမ်းရေး နဲ့ တရားမျှ တမူကို သက် သေ ထူ နိုင်သော ပစ္စုပ္ပန် ကို မြင် နိုင် ရပါ စေ။ သူ မချစ် တဲ့ ပြည်သူ တွေ နဲ့ အတူ မြန်မာ ပြည် ကြီး ကို အမြန်ဆုံး ကယ်တင်နိုင်ပါစေ။
I can't believe nobody haveacomment on this post.
ဖတ်ရင်းနဲ့ မျက်ရည်ဖြိုက်ဖြိုက်ကျမိတယ်။ ဘယ်တော့မှ မမေ့အောင်လို့ အမြဲတမ်း ဖတ်ပေးရမယ့် စာတွေပါ။ ။ ။
I cried when i read this post. Thank you very much.